के कारणले डण्डीफोर आउँछ जानीराखौँ ? - खुल्ला संसार
के कारणले डण्डीफोर आउँछ जानीराखौँ ?
2019-12-13 /in स्वास्थ्य- शिक्षा /by admin
काठमाडौँ ; कुनै पनि मानिस किशोर अवस्थाको उमेरदेखि डण्डीफोरको समस्याले सताएको हुन्छ । प्रायजसो डण्डीफोरले मानिसको युवाअवस्थामा देखिने चमत्कार नै समाप्त पारिदिन सक्ने भएको हुनाले ।
डण्डीफोर बढी तेलीय छाला, हर्मोनको गडबडीका कारण, पेट सम्बन्धि समस्याका कारणले, चाँयाको कारणले वा तनावको कारणले हुने गर्छ । डण्डीफोर छाला मुनि भएको चिल्लो, ब्याक्टेरिया तथा पोल्ने तत्वहरूबाट बनेको हो ।
जब डण्डीफोरलाई निचरिन्छ, त्यसबाट यी सबै तत्वहरू बाहिर निस्केर, छालामा घाउ तथा संक्रमण समेत गराउने गर्छ । यसरी डण्डीफोर निचोरेर हट्नु भन्दा पनि छालामा नकारात्मक असर देखाउने गर्छ । डण्डीफोर निचोर्दा छाला पोल्नुका साथै छालामा कालो दागहरू समेत बस्ने गर्छ । डण्डीफोर निचरेर बसेको दाग सदाको लागि समेत बस्ने गर्छ ।
साथै, डण्डीफोर निचार्दा नङ तथा हातको ब्याक्टेरिया र अन्य फोहोर पनि मिसिने हुदा छालामा थप संक्रमण हुने सम्भावना बढेर जान्छ । डण्डीफोर फुटाएको ठाउँमा संक्रमण भएर बारम्बार त्यहि ठाउँमा फेरी डण्डीफोर आउने गर्छ ।
यदि डण्डिफोर निचार्ने इच्छालाई दबाएर राख्न सकियो भने त्यो १ हप्ताभित्र आफै हराएर जान्छ र छालामा दाग पनि बस्ने गर्दैन । कुनै कुनै डण्डिफोर पाकिसकेपछि आफै फुटेर जान्छ । आफै फुटेको डण्डीफोरले बसेको दाग पनि एक हप्ता भित्र हराएर जान्छ । डण्डिफोर आउनुमा धेरै कुराले भूमीका खेलेको हुन्छ ।
अनुहारमा लगाउने क्रिम, साबुन, फेसवास, चिल्लो खानेकुरा, प्रदुषणका कारणले अनुहारको छालामा डण्डिफोर निम्त्याइरहेको हुनसक्छ । त्यसैले आफूलाई के कुराले डण्डिफोर ल्याउछ भन्ने विचार अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको बारेमा जानकारी लिन आवश्यक लिनुपर्ने हुन्छ ।
https://khullasansar.com/wp-content/uploads/2019/12/bb-2.jpg 317 592 admin http://khullasansar.com/wp-content/uploads/2019/12/Site-Logo-300x89.png admin2019-12-13 17:51:332019-12-13 17:51:33के कारणले डण्डीफोर आउँछ जानीराखौँ ?
अभिनेत्री ऋचा शर्माको विवाह... विप्लव नेकपाका स्याङ्जा जिल्ला...